Hindiya oo buundadii ugu dheerayd ka dhistay xadka Shiinaha - BBC News Somali
Hindiya oo buundadii ugu dheerayd ka dhistay xadka Shiinaha
Lahaanshaha sawirka Pronib Das
Image caption Dhismaha buundadan waxaa la billaabay 2011kii
Dawladda Hindiya ayaa xarigga ka jartay buundo uu dhererkeedu gaarayo 9.15 kiiloo mitir oo dul maraysa wabiga Lohit waana middii ugu dheerayd ee ay waligeed samaysato taas oo gobolka lagu muransan yahay ee Arunachal Pradesh ku xiraysa gobolka Assam ee ku yaalla Waqooyi Bari.
Dawladda Shiinaha ayaa sheegata in gobolka Arunachal Pradesh ay iyadu leedahay waxayna raacisaa "koonfurta Tibet".
Shiinaha ayaa dhawaan si wayn uga soo horjeedsaday go'aanka ay Hindiya ugu ogolaatay in uu gobolkaas booqdo hogaamiyaha ruuxiga ah ee Tibet, Dalai Lama sidoo kalana waxay ka cawdeen dhismeyaal milatari oo ay aagaas ka sameeyeen.
Laakiin Hindiya ayaa difaacday xaqa ay uleedahay in ay sidaas samayso.
"Maadaama oo Shiinuhu ay maalinba maalinka ka dambeeya soo dhiiranayaan waxaa la joogaa wakhtigii aan xoojin lahayn kaabayaashanada si aan dhulkanaga u difaacano", ayuu yiri wasiir ku xigeenka Arrimaha Gudaha ee Hindiya, Khiren Rijiju oo la hadlay saxafiyiinta.
Shiinaha oo garka iyo xijaabka ka mamnuucay Xinjiang
Rijuju oo ka soo jeeda gobolka Arunachal Pradesh ayaa horay u sheegay in gobolkani uu Hindiya ka mid yahay ninkii raba iyo kii aan rabinba.
Buundada Dhola Sadiya dhismaheeda waxaa la billaabay 2011kii, waxaana lagu dhameey wakhtigii loo qabtay.
Image caption Hindiya ayaa difaacday in ay xadka Shiinaha ka dhisato xarrun difaac
Lahaanshaha sawirka Dasarath Deka
Image caption Buundada Dhola Sadiya